XOG:- Xafiiska hanti-dhowraha guud ee qaranka oo la jabsaday iyo dokumentiyo muhiim ah oo la qaatay - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Xafiiska hanti-dhowraha guud ee qaranka oo la jabsaday iyo dokumentiyo muhiim ah oo la qaatay
Waxaa saacadihii ugu dambeysay soo baxaayay warar lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho uu hareeyay arrin fadeexad leh, kadib markii qaar ka mid ah xafiisyada ku dhex-yaala halkaasi la jabsaday islamarkaana laga qaatay dokumentiyo muhiim ah.
Warar hoose oo ay heleeyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya in habeenkii xalay oo ugu dambeeysay la jabsaday xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale, kadibne lagala baxay dokumentiyo uu hanti-dhowrka gacanta ku haayay.
Dhinaca kale, hay’adda nabad-sugidda iyo sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa la sheegayaa inay durbadiiba bilaabeen baaritaano ay ku sameeynayaan arrinkaan fadeexada ah ee ka dhacay xarunta madaxtooyadda Soomaaliya.
Sidoo kale, dokumentiyada laga xaday xafiiska hanti dhowraha qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ayaa la sheegayaa inay ku saabsanaayeen kuwa ka hadlayay wax isdaba marin baahsan oo lagu sameeyay miisaaniyadii dowladda ee sanadihii 2015-ka iyo 2016-ka, taas oo gaareyso illaa 110 milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Illaa iyo haatan ma cadda cidda rasmiga ah ee ka dambeysay arrintaan, balse waxaa la sheegayaa in saraakiisha nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ay haatan su’aalo weydiinayaan shaqaalaha xafiiska hanti-dhowrka iyo kuwa dhismaha wasaaradda maaliyadda oo looga shakisan yahay inay arrintaan iyaga ka dambeeyeen.
Ugu dambeyntii, xarunta madaxtooyadda oo la ogsoon yahay inay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa AMISOM ayaan la ogeyn sababaha ay kooxaha dhaca ka geystay halkaasi u arki waayeen ama u qaban waayeen, maadaama ay adag tahay in dhac qorsheeysan loo geysto xafiis ku dhex-yaala xarunta madaxtooyada Soomaaliya.